Zvinhu Zvinotyisa Zvinofanira Kuitwa muToronto Iri Ichando
Tarisa zvinhu zvakanakisisa zvekuita muguta rino chirimo
Zuva muguta rinozopedzisira riri pamusoro pedu uye rinenge ranzwa serinenge richibhururuka. Kana iwe uri kushamisika kuti ungaita sei kuti iwe uwedzere kutonhora kwemazuva emvura, pane zvakawanda zvokuita kuti uchengetedze iwe pasinei pasinei nokuti iwe unofarira zhizha zhizha. Guta rizere nemhemberero, zviitiko nemabasa akakodzera nguva yako ino mwaka. Pano pane gumi zvezvinhu zvakanakisisa zvokuita muToronto muzhizha ino.
Hapana dziva pamba? Hapana dambudziko. Toronto haisi pfupi pamatunhu kuti asvikire mune dziva rekunze , iyo chikomborero pane zuva rinopisa apo zvose zvaunoda kuita zvinotonhora. Guta iri musha wezvikepe zvekunze makumi mashanu nemakumi mashanu pamwe chete nemasikati makumi mana nemazana makumi mana nemakumi mana nemapfumbamwe ekuputira madziva uye 93 kupwanya mapadhesi - naizvozvo iwe unokwanisa kuwana pane imwe nzvimbo yokuputira munharaunda yako. Mukuwedzera kune Sunnyside, dzimwe nzvimbo dzakakura kuti dzizive dzinosanganisira Alex Duff Memorial Pool, Monarch Park Pool, Greenwood Park Outdoor Pool uye High Park Pool kunoreva zvishoma chete.
Itai musangano wezvokudya
Chimwe chinhu chinonaka chinotarisira kubva kuAIDS Fest. Mufananidzo unoenderana neCoronto Food Fest kuburikidza ne Instagram
Iko pane nguva ipi neipi muToronto kuti iite mutambo, iri muzhizha. Kune zviitiko zvakawanda zvezvokudya uye mhemberero dzinoitika zvingange zvisingagone kuvarova zvose. Zvokudya festivals inzira yakanaka yekuedza kudya zvitsva kubva kune dzimwe nyika uye kubva kune dzimwe nzvimbo dzakanakisisa dzekudya muguta. Itai chido chenyu ku TO Food Fest (July 9-10), Toronto Food Truck Festival (July 29-31), Pan American Food Festival (August 13014) uye Toronto Vegan Food and Drink Festival (August 13).
Buda panomutambo wemugwagwa
TD Mutambo weAsia 2015. Mufananidzo unofadza TD Festival yeAsia
Kufanana nezviitiko zvezvokudya muguta, mazhizha muToronto ndiyo nguva yemigwagwa yemigwagwa. Aya ndiwo mukana unofadza wekuziva nzvimbo uye kubatana nemunharaunda. Mamwe emitambo yemugwagwa iyi gore rinosanganisira Big on Bloor (July 23-24), Salsa paSt. Clair (July 9-10), Chirongwa cheSt. Lawrence (July 8-10), TD Mutambo weAsia (August 15-16) ) uye Mutambo weKabbagetown (September 7-11) kutumidza mazita mashomanana anoitika muzhizha rose.
Tenga mushamba wokunze
Mifananidzo kubva kuLeslieville Flea. Mufananidzo unobvumirana neLesliville Flea via Instagram
Zvechokwadi, iwe unogona kutengesa mune mall, asi muzhizha sei uchirega kushandisa nguva yezuva uye kutenga pamusika wekunze ? Zvichida iwe ukashandisa imwe yemashamba emapurisa akawanda eguta racho, kana imwe yemisika yemwaka yakawanda ichienda kumativi ose eguta racho, pane mikana yakawanda yokutenga kunze kwezvinhu zvose kubva pazvokupfeka zvemazambiringa kusvika kumaruva kusvika kune zvokudya. Chengetedza Leslieville Flea, Waterfront Artisan Market uye Lakeview Market kutumidza vashomanana.
Tarisa firimu pasi peredzi
Movie iri pasi peredzi. Mufananidzo unofanirwa newaferboard neFlickr
Chengetedza multiplex ye apo iwe unoda kuvanza kubva munguva yechando inotyisa mhepo chill. Munguva yezhizha, shandisa mikana yekubata flick panze . Kunyangwe iri Christie Pits, Harbourfront, Yonge-Dundas Square kana Regent Park, iwe unosarudza nzvimbo dzako kuti uone kunze kwechando chine flicks.
Sun iwe pachako paSunnyside
Kupinda kweSundayside Pavilion. Mufananidzo unofanirwa neGuta reToronto neFlickr
Sunnyside Pavilion, iyo yakakura, yakaisvonaka, inhau yezvekugadzira deco dame, ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisisa dzinenge dziri muzhizha. Chokutanga, Sunnyside Gus Ryder dzimba ndechimwe chezvinyorwa zvepamusoro uye zvakanakisa zvepasimari zvekunze ne Toronto. Zvisingatauri, uri kurudyi pedyo neMvurafront Trail pamwe chete neSunnyside Beach. Uye kana wapedza kushambira uye zuva iwe unogona kunakidzwa kunwa kana imwe pub grub uye mapuranga oven oven ku beachfront Sunnyside Café.
Musoro kusvika kumhenderekedzo
Guva rezuva muToronto. Mufananidzo unofanirwa neToronto Toronto
Mukuwedzera kune Sunnyside Beach inonzi ichangobva kutaurwa, Toronto inokomborerwa nehuwandu hwakanaka hwejecha hwakakosha yekuputira pasi nebhandi uye gungwa rakanaka rakaverengwa. Dzokera kuToronto Islands kuti unakidzwe neWard Island Island kana Hanlan's Point, kana kutarisa Cherry Beach kana Kew-Balmy Beach kumabvazuva kweguta racho.
Kunonoka nehutano hwakaoma
Zhizha ndiyo nguva yakakwana yekugadzirisa muhutano hwakaoma uye Toronto ine zvimwe zvingasarudzwa zvekugadzirisa nechinhu chinotapira. Paletas, Mexican ice pops, inowanika munzvimbo dzakawanda kuToronto kusanganisira Wrestlers muKensington Market uye kuCafé Con Leche muChinction Triangle. Zvisingatauri, Thai ice cream rolls kubva kuArctic Bites, churro ice cream cones kubva kuPancho's Bakery uye yakananga ice cream cones kubva kuDutch Dreams.
Tarisa kunze kwemafirimu yemutambo
Toronto Outdoor Art Exhibition 2015. Mufananidzo wakajeka ku Toronto Outdoor Art Exhibition
Wedzera kune unyanzvi hwekugadzira iyi yezhizha nerwendo rwekunze kwemafirimu emitambo, iyo mune zvakawanda muToronto. Uye hatisi kungotaura kutema-uchaona kuvepa mafirimu zvakanaka-anomiririrwa pamwe nemamwe mamiririri ari kuratidzwa muguta rose. Zvimwe zvinosanganisira Toronto Outdoor Art Exhibition (July 8-10), Entertainment District Art Crawl (July 18) uye Bloorcourt Arts and Crafts Fair (August 27).
Ita iwe nzira yemutambo wemimhanzi
Music celebration fun.
Zuva nderimwe mutambo wezvokudya wegore, mhemberero yemugwagwa mushure uye zvirokwazvo mumhanzi festival season. Takaona maverengi akareba zvakadaro, asi kune zvakawanda zvemimhanzi zvinotarisa kutarisira kufanana nezvinodiwa nemimhanzi, kusanganisira VELD Music Festival (July 30-31), OVO Fest (July 29-August 1), Camp Wavelength (August 19-21), Mutambo Wenguva (August 6) uye TURF (Svondo 15-19).
ICNE usiku. Mufananidzo unofanirwa neIan Muttoo kuburikidza neFlickr
Chii chiri chirimo kunze kwekuenda kune kuguma kwegore negore kwemwaka kunakidzwa kwakanaka? ICanada National Exhibition inosvika kubva munaAugust 19 kusvika kuSeptember 5 uye unogona kutarisira kuti inowanzova inotyisa yemakwikwi, mitambo, zvokudya uye varaidzo. Ita zvinhu zvakadzika zvakabikwa muzvivako zvekudya kana kuzadza kuRebfest (kuitika zuva rimwe nerimwe reCNE), shandisa imwe doro paCraft Beer Fest (August 26-27), tora mamwe mazano ekubika kubva kune vakakanganisa vatengesi kusanganisira Michael Smith naLynn Crawford, ita zvimwe zvekutenga paInddoor Marketplace nezvimwe zvakawanda.
Pwanya pasi giant slide
Giant slide. Mufananidzo unofanirwa neMack Male kuburikidza neFlickr
Iyo giant slide, kurumbidzwa kweSlide City, iri kudzoka kuToronto July 16. Kana uri wakarurama nekumirira mune chokwadi chekugara kwenguva refu, ipa yako swimsuit, tora inflatable tube uye enda kuArtsview Park kune Nzira inofadza yekudzidzira pa ((tarisai) zuva rakatsva. Kana ukakanganwa tubhuti, pachava nemimwe yekutenga pa-site.
Kuenda kuToronto munaJanuary
The 8 Best Airport Hotels kuToronto
10 Nzvimbo Dzokuwana Doro Dzakashata muToronto
Mutemo Wekumwa Kwemitemo muToronto
Nei Tichifanira Kushanyira Toronto muna 2017
Izvo "Zvakavanzwa" Zvinodhura zvekutengesa
"Zvose Pakaitika Pasi" Kubva Muvaraidzo waHarrah, (Haisisina Nguva Yakawedzerwa)
TOTEM ne Cirque du Soleil: Kudzokorora
Kuchengetedza Kumba: Mazano Okutanga
Kudzokorora kweChina Hotel Colmberg
100 Vekudya muLas Vegas
6 Anoshamisa Mazvimbo Iyo Dollar Inoenda Kuwedzera
Autumn Kufamba muItaly
Nguruve Chorizo ​​Burger Recipe
7 Zvimwe Zvimwe Zvaunogona Kuita NeRaibhurari Yenyu
Nzira Dzakakwirira Kupemberera Zuva raBaba
Popular News and Talk Radio Stations muMiami, Florida